Yugyan Daily » ६० प्रतिशत संक्रमितको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ बारा, पर्सा र भारत
काठमाडौं अर्को ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा
भारतको विहारबाट २९ वर्षीय एक युवक गत साता काठमाडौं आइपुगे । नागढुंगा नाकामा स्वाब दिएका उनको दुई दिनपछि पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । उनले फारम भर्दा टिपाएको नम्बरमा डायल गर्दा फोन नलागेपछि उनी दुई दिनसम्म सम्पर्कविहीन भए ।
भक्तपुरमा साउन २५ गतेसम्म ८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुमध्ये ४९ जना उपत्यका बाहिरबाट ट्राभल गरेर आएका छन् भने ३६ जना यहीँका बासिन्दा । ट्राभल गरेर आएका ४९ जनामध्ये ३ जना भारतबाछ आएका छन् । गएका १० दिनमा मात्रै भक्तपुरमा २९ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो, जसमध्ये १९ जना त उपत्यका बाहिरबाट ट्राभल गरेर आएका थिए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गएका १० दिन -मंगलबार बाहेक) मा उपत्यकामा ५६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनीहरुमध्ये ३२८ जनाको उपत्यका बाहिरको ट्राभल हिस्टी छ । उनीहरुमध्ये पनि २२ जना त भारतबाट हालै मात्र आएका छन् । यो तथ्याकंले उपत्यका बाहिरबाट जाँच नगरी काठमाडांै छिर्नेहरुका कारण उपत्यका संक्रमणको जोखिममा रहेको देखाउँछ ।
ईडीसीड अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकामा भेटिएका ६० प्रतिशत संक्रमित उपत्यका बाहिरबाट आएका छन् । त्यसमा पनि धेरै पर्सा, बारा, सप्तरी र रौतहटबाट आएका छन् । ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर पाण्डे भन्छन्, ‘उपत्यका बाहिरबाट आएर काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका अधिकाशं संक्रमित कामको सिलसिलामा प्रदेश-२ बाट आएका तथ्याकंले देखाउँछ ।’
र, काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बन्दैछ । गएका २ दिनमा देशभर १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्युभएको छ । सोमबार मात्रै २ ललितपुरमा २ जना संक्रमितको मृत्यु भयो भने काठमाडौंमा एकजना संक्रमितको मृत्यु भयो । गत शुक्रबार यता हरेक दिन ५ जनाको मृत्यु भएकाले पनि संक्रमणको डर बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय वीरगञ्जसँगै बिराटनगर पनि कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको देखिन्छ । अब उपत्यका पनि त्यहीबाटोमा जान लागेको जनस्वास्थ्यविज्ञहरु बताउँछन् । ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर पाण्डे पनि सीमा नाकामा कडाइ गर्न नसकेकाले कोरोना नियण्त्रण बाहिर जान लागेको बताउँछन् ।
‘वीरगञ्जमा भारतबाट लुकिछिपी आउनेहरुका कारण संक्रमणले भयावहको रुप लियो । उपत्यकामा पनि भारत तथा संक्रमण फैलिएको तराईका जिल्लाहरुबाट आएकाहरुबाट संक्रमण फैलिँदैछ,’ डाक्टर पाण्डे भन्छन्, ‘नाकामा कडाइ नगर्ने हो भने उपत्यका अर्को हटस्पट बन्नबाट रोक्न सकिँदैन ।’
हुन पनि उपत्यकामा कोभिडको बिरामी राखिएका अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कोभिडको लागि भनेर ५/५ भेन्टिलेटर र आईसीयू वेड भन् भने ११ आइसोलेसन वेड छुट्याइएको छ । अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दास अब बेड अपुग हुन थालेको बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दिनदिनै संक्रमित थपिएकाले बेडको अपुग भएको छ, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ ।’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । २० आईसीयू र ३० आइसोलेसन वेड भएको यो अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारी भन्छन्, ‘संक्रमित थपिरहेका छन्, राख्न गाह्रो छ ।’
पाटन, बलम्बु, केएमसीलगायतका उपत्यका कोभिड अस्पतालहरु पनि संक्रमितले गरिएका छन् । अस्पतालमा बेडको अभाव हुँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पताललाई २० प्रतिशत शय्या कोभिड-१९ का बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई होम आइसोलेसनमा राखेका छौं । अस्पताल भर्ना गर्नुपर्नेलाई घरमा राखेर भएन । त्यसका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन भनेका हौं । यसले पुगेन भने थप बेड छुट्याउन भन्छौं ।’
संक्रमितको संख्या यही रˆतारमा बढे भने निजी अस्पतालहरुले पनि धान्न गाह्रो हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका २० वटा निजी अस्पतालमा १९४ वटा आइसोलेसन, २९१ वटा आईसीयू र १३६ वटा भेण्टिलेटर उपलब्ध छ ।
अस्पतालले धान्दैन, नाकामा कडाइ गरौं
यही रˆतारमा संक्रमित बढे उपलब्ध पूर्वाधारले नपुग्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
‘मास्क, मास्क र मास्क’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन भन्छन्, ‘संक्रमित भइयो भने उपचार पाउन गाह्रो हुने अवस्था छ, त्यसैले आफैं सचेत हुनुपर्छ ।’ अन्तराष्ट्रिय सीमा नाकामा कडाइ गर्ने, उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षण गर्ने जस्ता उपाय अपनाएर समुदायमा संक्रमण पुग्नबाट रोक्न सकिने डाक्टर पुन बताउँछन् ।
केही समय सीमामा कडाई गरेको भए उपत्यकामा यो अवस्था नआउने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद वन्तको तर्क छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमण सार्ने मुख्य स्रोत उपत्यका बाहिरबाट आएका संक्रमित भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीसँग उपचारका लागि पर्याप्त स्रोत र साधन छैन भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नैपर्छ’ डा. वन्त भन्छन्, ‘अझै पनि काठमाडौं उपत्यका छिर्ने नाका कडाइ गर्नुको विकल्प छैन ।’
डाक्टर वन्तको तर्कमा जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित पनि सहमत छन् । उपत्यकाको संक्रमणको रˆतार रोक्न नाकाहरुमा कडाइ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संक्रमित क्षेत्रबाट आउने मानिसहरुलाई नाकामै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने उपत्यकाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ डाक्टर दीक्षित भन्छन् ।
संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आउनेहरुलाई परीक्षण गरेर संक्रमितलाई आइसोलेट नगरे काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिन सक्ने डाक्टर वन्तको निष्कर्ष छ । ‘संक्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट आएकामध्ये एकजनालाई संक्रमण रहेछ र त्यो मानिस सार्वजनिक यायायात चढ्यो भने धेरैमा संक्रमण सर्नसक्छ,’ डाक्टर वन्त भन्छन्, ‘त्यसैले नाकाबाट आउनेहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’